Sarkaal boolis ah oo lagu dilay Beledweyn & Kooxdii dishay oo la toogtay | Arrimaha Bulshada
Home News Sarkaal boolis ah oo lagu dilay Beledweyn & Kooxdii dishay oo la toogtay
Sarkaal boolis ah oo lagu dilay Beledweyn & Kooxdii dishay oo la toogtay
Bulsha:- Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil xalay magaalada Beledweyn loogu geystay sarkaal ka tirsan ciidamada booliska maamulka Hirshabelle, kaasoo magaciisa lagu sheegay Axmed Xasan Biriq, iyagoo dilka u adeegsaday bistoolado ay wateen.
Sarkaalka oo ahaa laba xidigle boolis ah ayaa dilkiisa waxa uu si gaar ah uga dhacay xaafadda howlwadaag, iyadoo rasaasta lagu tooganayay ay ku soo bexeen ciidamo ku sugnaa saldhigga galbeed ee magaalada oo aan ka fogeyn halka didlka uu ka dhacay.
Saraakiil boolis ah oo suxufiyiinta u warantay ayaa sheegay iney dileen laba kamid ah ragii dilka u geystay marxuum Biriq, iyadoo dagaal mudo kooban socday uu dhexmaray danbiilayaasha iyo ciidamada booliska, iyadoo sidoo kale ay soo qabteen bambooyin iyo laba bistoolad ay wateen.
Laamaha amaanka ee maamulka Hirshabelle ayaa warbaahinta u soo bandhigay meydadka labada dhalinyarada ah ee dishay sarkaalka booliska ah, iyagoo digniin adag u diray waalidiinta ku nool gobolka Hiiraan iney ka warhayaan dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan caruurtooda, si aan loo marin habaabin.
Magaalada Beledweyn oo si habsami leh ay uga socoto doorashada kuraasta golaha shacabka ee Hirshabelle ka soo galeysa baarlamaanka, ayaa waxaa hadana barbar socda falal amni daro oo isugu jira qaraxyo iyo dilal ay geysanayaan kooxaha dowladda ka soo horjeeda, waxaana magaalada ku sugan ciidamo fara badan oo qaarkood laga qaaday Muqdisho.